बजेट ०७२/०७३ मा सूचना प्रबिधि – Nepali Tech Blog
पुर्वाग्रही हुनु राम्रो होइन तर विगतलाई नहेरी वर्तमानलाई मुल्याकंन गर्ने निरपेक्ष विधि थाहा छैन । यसपाली पेश भएको बजेटको मुल्याकंनमा पनि यो लागू भयो । कांग्रेस र एमालेको सरकार छ । र, अर्थमन्त्री छन् रामशरण महत । नेपालमा सबैभन्दा बढि पटक बजेट पेश गर्न पाउँने भाग्यमानी यीनै हुन् । यो पटकसम्म ८ पटक भइसक्यो यीनले बजेट पेश गरेको । यीनले पछ्याउँने अर्थनीति पहिलो पटक यीनले बजेट पेश गर्दा जे थियो, अहिले पनि त्यही छ । समाज जहाँ पुगोस् वा अवश्था जस्तोसुकै परिवर्तित होस्, यीनलाई त्यसको मलतब खासै हुन्न । यसैले यीनले पेश गर्ने बजेटमा यस्तै कुराहरु आउलान् भनेर अनुमान गर्न त्यति विघ्न गाह्रो नहोला पनि । भयो ठ्याक्कै त्यस्तै ।
फरक कोणबाट फरक फरक धारणाहरु बनेका छन् । यहाँ ति धारणाहरु लेख्न खोजिएको भने होइन । मात्र सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा बजेटमा के कस्ता कार्यक्रम ल्याइयो र कति बजेट छुट्याइयो भन्ने देखाउँन खोजिएको हो ।
यस अगाडीका बजेटहरुमा गफैमात्रमा सिमित भएपनि केहि कार्यक्रमहरु पेश गरिएको थियो । जस्तै : निश्चित सिमा तोकेर इन्टरनेट बैंकिङका लागि पेपाल प्रयोग गर्न दिइने, सरकारले होस्टिङ कम्पनी सुरु गर्ने, डाटा संरक्षणका लागि सरकारी क्लाउड बनाइने आदि आदि । कतिपय कार्यक्रमहरु यसरी हचुवाका भरमा लेखिएका थिए कि बुझ्नेले पढेर पेट मिचिमिचि हास्न काफी थिए । तर हचुवाकै भरमा पाना भर्नका लागि मात्रै लेखिए पनि सूचना प्रबिधिलाई सरकारले चिन्छ है भन्नसम्म पाइने स्थिति भने थियो ।
८९. ग्रामीण दुरसञ्चार प्रविधि कोषको रकम समेत उपयोग गरी भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराई जिल्ला सदरमुकाम लगायत नगरपालिकाहरुलाई सूचना प्रविधियुक्त सहरको रुपमा विकास गरिनेछ ।
२२४. ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोषको रकम उपयोग गरी मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई स्मार्ट सिटी निर्माण कार्यको थालनी गरिनेछ । ग्रामीण सूचना केन्द्रहरु स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
१७५. ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका १०० सामुदायिक विद्यालयहरुमा परीक्षणको रुपमा ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेटका माध्यमबाट अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयको अध्यापन शुरु गरिनेछ । यसबाट ती विद्यालयका विद्यार्थीहरुको शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने अपेक्षा राखेको छु ।
सुरु नै नभइ हटाइए पहिलेका योजना
पहिलेका केहि कार्यक्रमले यसपाली निरन्तरता पाएर सम्पन्न होलान् भन्ने आशा थियो । तर वास्तवमा त्यसको उपयोगिताका बारेमा नजरअन्दाज गरिदिएकाले कतिपय पुराना योजनाहरु अलपत्र पारिए ।
सिमा सहितको पेपाल प्रयोग, होस्टिङ कम्पनी, सरकारी क्लाउड जस्ता यसअगाडी समेटिएका योजनाहरु यसपालीको बजेटमा कतै लेखिएन ।
उदाहरणका लागि सरकारी वेवास्ता हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिगत पहलमा नेपालको प्रविधि निकै अगाडी बढिसकेको छ तर पेपाल जस्ता अनलाइन पेमेन्ट गर्न वा पैसा लिनका लागि आवश्यक माध्यम नहुँदा नेपालबाटै गर्न सकिने आम्दानी सबैको पहुँचमा पुग्न पाएको छैन ।
मैले छुटाएका र तपाईले भन्नु पर्ने कुराहरु तल कमेन्टमा लेख्नुहोला ।